Sule Shangri-La Hoel April Promotion!
8th to 23rd April 2017.
242828 (Ext. 6321, 6322)
No. 223, Sule Pagoda Road, Yangon.
Get wet and wonderful as we celebrate the water festival of Myanmar here in Sule Shangri-La, Yangon!
Start your morning withabreakfast buffet at Cafe Sule and dress up with our exclusive Thingyan T-shirt, Water-gun and Waterproof pouch. Capped off with one Buffet dinner for two personat Cafe Sule. Enjoy with US$155++ for minimum two consecutive nights stay. Available from 08 to 23 April 2017.
For inquiries and reservations, please call (01) 242828 ext 6321, 6322, 6324 or reservations.ssyn@shangri-la.com
Cherished at Chatrium Dream Wedding Fair 2017
+95 1 544500
No. 40, Nat Mauk Road, Bahan Tsp, Yangon.
Booths opening - 9am to 3pm at Chatrium Grand Ballroom, 3pm to 9pm at Ngapali Pool Garden
Wedding Dress show - 6pm to 9pm at Ngapali Pool Garden.
LG Biggest Sale!
11th March - 11th April 2017
01-379955, 01-8603335, 01-254561
LG Brand Shop (Sule), LG Brand Shop (Kabar Aye), LG Brand Shop (Pansodan), LG Brand Shop (Myanmar Plaza)
- 24" LED TV (24MT48VF) (or) 32'' LED TV (32LH500D) - Free Gift (FAN)
- အခြား LG အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်း ဘာဝယ်ဝယ် ဗလာမပါ ခဲခြစ်ကံစမ်းမဲ
- Grand Lucky Draw ထပ်ဆင့်ကံစမ်းမဲ
Royal Modern Furniture Promotion!
10th March - 12th April, 2017
4th Flr., Yuzana Plaza, Mingalar Taung Nyunt Tsp., Yangon
5 % to 50 % OFF
March 10 to April 12
Ga Mone Pwint (San Yeik Nyein) Summer Sale Promotion!
25th Feb - 31th March, 2017
No. 96-108, Yangon-Insein Rd., San Yeik Nyein, Kamayut Tsp.
ဂမုန်းပွင့်(စံရိပ်ငြိမ်)ပထမထပ်ရှိ ဂမုန်းပွင့်အရောင်းကောင်တာများတွင် 25-2-2017 မှစတင်၍ တစ်နေ့တာအတွင်း ကျပ် 50,000 ဖိုးနှင့်အထက် ၀ယ်ယူသူတိုင်း ကျပ် 5,000 ဖိုး ကူပွန်တစ်ခု လက်ဆောင်ရရှိနိုင်ပါမည်။ ထိုကူပွန်ဖြင့် ဂမုန်းပွင်း(စံရိပ်ငြိမ်)ရှိ စားသောက်ဆိုင်များတွင် အခမဲ့ပြန်လည် စားသုံးနိုင်ပြီး Discount နှင့် လက်ဆောင်များ ထပ်မံရရှိနိုင်မည့်အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။
Grand Style Water Festival Promotion 2017
22nd Feb - 12 April, 2017
G3, Unite G46-G52, Thudhama Road, North Okkalapa Tsp., Yangon.
Inbloom Travels & Tours Promotion
22nd, Feb to 31st, Mar 2017
01 558922, 09-976240360
20/B, G/F, 166th St., Tamwe Tsp.
ခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် အရမ်းတန်တဲ့ Air Kbz Airline Promotion!!!
ရန်ကုန် - ချင်းမိုင် - ရန်ကုန် အသွားအပြန် ( အနည်းဆုံး ၂ ဦး - အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၉ ) မှစတင်ပြီး ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ ။
Promotionလက်မှတ်များ ကို မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ ထိဝယ်ယူနိုင်ပြီး ခရီးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Promotion ထိုင်ခုံအရေအတွက် ကန့်သတ်ထားသည့်အတွက် ခရီးစဉ်သွားရန်ရှိသော ခရီးသည်များအနေဖြင့် ကြိုတင် ၀ယ်ယူထားမှ စိတ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ဒီ Promotion လေးကို စိတ်ဝင်စားသူများကတော့ Inbloom Travel ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ကြိုတင်ဘိုကင်လုပ်ထားမှ စိတ်ချရမယ်နော်။မှာယူမည်ဆိုပါကလည်း အိမ်တိုင်ရာရောက် အခမဲ့ပို့ ဆောင် ပေးနေပါပြီ။
ဖုန်းဆက်မှာယူလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၁၅၅၈၉၂၂ ၊ ၀၉၉၇၆၂၄၀၃၆၀၊၀၉၄၂၀၂၂၉၈၄၄ ကိုဖုန်းဆက်မှာယူနိုင်ပါကြောင်း နှင့်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဝယ်ယူလိုပါက အမှတ် ၂၀ ဘီ မြေညီထပ် ၁၆၆ လမ်း တာမွေသို့ လာရောက်ဝယ်ယူ နိုင်ပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
အရမ်းတန်တဲ့ Promotion လေးဖြစ်လို့ အမြန်ဝယ်ယူထားမှ စိတ်ချရမယ်နော်……
Feb 22nd ~ Apr 30th, 2017
အရမ်းတန်တဲ့ Myanmar Airways International ( MAI ) အထူး Promotion!
ရန်ကုန်-ဘန်ကောက်-ရန်ကုန် ( 99 USD )
မန္တလေး-ဘန်ကောက်-မန္တလေး ( 144 USD )
ရန်ကုန်-စကာင်္ပူ-ရန်ကုန် ( 204 USD / GV2 Promotion ) အနည်းဆုံး ၂ဦးသွားရမည်။
ရန်ကုန်-ကွမ်ကျိူး-ရန်ကုန် ( 303 USD / GV2 Promotion ) အနည်းဆုံး ၂ဦးသွားရမည်။
ရန်ကုန်-ကွာလာလမ်ပု-ရန်ကုန် ( 118 USD )
ရန်ကုန်-ကာလာကတ္တား-ရန်ကုန် ( 303 USD )
Tax အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသဖြင့် 1$ မှ5$ အပိုထပ်ပေးဆောင် ရခြင်းများ လည်းရှိနိုင်ပါသည်။ Promotion ကိုဝယ်ယူနိုင်မည့်ကာလနှင့် ခရီးသွားနိုင်မည့်ကာလမှာ ယနေ့မှစ၍ 30 Apr 2017 ထိဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိုမိုးရှင်း ထိုင်ခုံအရေအတွက်မှာ ကန့်သတ်ထားသည့် အတွက် ခရီးစဉ်သွားရန်ရှိသော ခရီးသည်များအနေဖြင့် ကြိုတင် ၀ယ်ယူထားမှ စိတ်ချရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ဒီ Promotion လေးကို စိတ်ဝင်စားသူများကတော့ Inbloom Travel ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ကြိုတင်ဘိုကင်လုပ်ထားမှ စိတ်ချရမယ်နော်။ မှာယူမည်ဆိုပါကလည်း အိမ်တိုင်ရာရောက် အခမဲ့ပို့ ဆောင် ပေးနေပါပြီ။
ဖုန်းဆက်မှာယူလိုပါက ၀၁ ၅၅၈၉၂၂ ၊ ၀၉ ၉၇၆၂၄၀၃၆၀ ၊ ၀၉ ၄၂၀၂၂၉၈၄၄ ကိုဖုန်းဆက်မှာယူနိုင်ပါကြောင်း နှင့်ကိုယ်တိုင်လာရောက် ၀ယ်ယူလိုပါက အမှတ် ၂၀ ဘီ မြေညီထပ်၊ ၁၆၆ လမ်း တာမွေသို့ လာရောက်ဝယ်ယူ နိုင်ပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
Tiger Hill Chinese Restaurant Promotion
February 15th ~ March 31st, 2017
544500 (Ext. 6294)
Tiger Hill Chinese Restaurant, Chatrium Hotel Royal Lake, Bahan Tsp., Yangon
Special promotion: come5pay4for daily lunch, now until 31 March 2017 for only USD 24.00 nett person.